Uphuhliso lwe-Instagram kwiifowuni ze-Android ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uphuhliso lwe-Instagram kwiifowuni ze-Android
Disemba 27, 2018 0 IiCententarios 949
I-Instagram kwiselula yakho
I-Instagram sisicelo esivumela abasebenzisi ukuba babeke iifilitha ezicwangcisiweyo kwiifoto zabo ukufezekisa i-cadence ephezulu.
Kweli lizwe lihamba ngokukhawuleza, wonke umntu ufuna ukuba izinto zenzeke ngokukhawuleza, njengokukhuphela iifayile, ukwabelana ngeefoto, ukukhangela i-Intanethi, njl. Wonke umntu ufuna ukwabelana ngeefoto nosapho kunye nabahlobo, kodwa yinkqubo ende nexesha elininzi.
Ngokuqulunqwa kwesi sicelo, yaba ngumsebenzi olula ukwabelana ngeefoto. Esi sicelo sinokusetyenziselwa ukuthatha iifoto ngqo okanye ukucwangcisa iifoto ezikwimemori yefowuni, zisebenzise iifilitha zobugcisa kwaye ke sabelane ngazo kwiindawo ezahlukeneyo zonxibelelwano zentlalo, kubandakanya Instagram. Iifoto zinokuvunwa kwifomati yesikwere kwaye emva koko ziqhubekeka ngokusebenzisa iifilitha ezininzi ukuze zizinike imbonakalo yomdiliya.
Unokuba nomdla indlela yokufumana ukuthandwa ngakumbi kwi-Instagram.
Abasebenzisi befowuni ye-Android babelinde inkampani ukuba yenze isicelo se I-Instagram ye-Android Ixesha elithile ngoku. Nge-Epreli 3 esuka kwi-2012, inkampani ibhengeze ukuba yaqulunqa isicelo se-Instagram kwiifowuni ze-Android.
Esi sicelo se-Android sisebenza naluphi na uhlobo lwe-OS 2.2 kunye nangaphezulu exhasa i-OpenGL ES. Esi sicelo sinokhetho olufanayo kunye neempawu njengoko isicelo se-I-OS siquka: okobuqu, ikhaya, useto lomfanekiso, njl. Akukho zixhobo zongezelelweyo kolu hlobo.
Umsebenzisi angadibanisa usetyenziso kwezinye izixhobo ngokusebenzisa inkqubo yenkqubo ye Izicelo ze-Instagram. Into ephambili yesi sicelo kukuba abasebenzisi banako Yabelana ngeefoto phakathi Instagram kumaqonga amaninzi ngaphandle kokulinda ixesha elide.
Le app yasimahla kwaye inkampani kungekudala iza kusungula imodeli yamaxabiso "Freemium" enezinye izinto ezongezelelekileyo, ezinokuthengwa ngentlawulo yokubhaliselwa ngegama.
Ukufikelela kwisicelo se-Instagram se-Android, abasebenzisi kufuneka bhalisa kwi-Instagram kunye nesazisi sakho. Imeyile, idilesi, igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Le akhawunti inokunxulunyaniswa kwiisayithi ze nomphakathi njengaye Facebook, Twitter, Iiakhawunti zeTumbler, njl.
Abasebenzisi be-Android ngoku banokuthatha iifoto okanye basebenzise iifoto ezikhoyo ezivela kwigalari yemifanekiso kwiifowuni zabo kwaye babavumele ukuba benze utshintsho olukhawulezileyo ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokucoca emva koko babelane nabanye ngezo foto.
Esi sicelo se-Android sivumela abasebenzisi Fumana abalandeli be-Instagram, eyenza ukuba ibe yinethiwekhi yoluntu. Esi sicelo sezixhobo ze-Android senze kwalula kubasebenzisi ukuba babelane ngeefoto zabo kunye nabangengabo abasebenzisi be-Instagram kwi-Facebook naku-Twitter.
Isicelo esenzelwe iifowuni ze-Android ziyahambelana nazo zonke iifowuni ze-2.2 ze-Android. Inkampani ikwaphehlelele kwaye yahlaziya ingxelo leyo ineezilungiso ezithile ezifana:
Impazamo yesimungulu somsindo xa umsebenzisi ethimba ukulungisa.
Isicelo sihambelana nazo zonke izixhobo ze-Wi-Fi kunye namacwecwe.
Abasebenzisi abanokugcinwa okulinganiselweyo banokufaka le sicelo kwikhadi lememori yangaphandle.
Kwafunyaniswa ukuba, ngaphezu kwe-1 yezigidi zabasebenzisi beGoogle abakhuphele isicelo kwiiyure zokuqala ze-24 kwaye bekukho izikhombisi ze-719,874 kwi-Instagram kunye ne-Android Twitter kwiiyure zokuqala ze-24 zokuqaliswa kwesicelo. Kukho ezinye izinto eziqhotyoshelwe kwisicelo, ezenza ngaphezulu kwesicelo sokuphucula.
1 I-Instagram kwiselula yakho
2 I-Instagram ye-Android
Disemba 26, 2018
Konke malunga ne-Instagram: yintoni ekufuneka uyazi
Iingcebiso zokuqalisa kwi-Instagram kwaye ufumane abalandeli